odyssey Ọla - Imewe Mmewe
Satọdee 8 Jenụwarị 2022
Ọla Isi echiche nke odyssey nke monomer na-agụnye ikpuchi ọdịdị nke ọdịdị nke geometric na akpụkpọ nwere usoro. Site na nke a, a na-egosipụta ntanetị nke idoanya na mgbagho, nghọta na nzuzo. Enwere ike jikọta ụdị geometric na usoro niile dị ka uche si chọọ, dịgasị iche iche ma gbakwunye ya na mgbakwunye. Echiche a na-adọrọ adọrọ, nke dị mfe na-enye ohere maka ịmepụta ụdị atụmatụ dịkarịsịrị iche, na-ekwenye nke ọma na ohere dị iche iche site na ntinye ngwa ngwa (ibipụta 3D), dị ka ndị ahịa ọ bụla nwere ike ịnwe ihe na-enweghị atụ ma mepụta ihe (gaa na: www.monomer. eu-shop).
Aha oru ngo : odyssey, Aha ndị na-emepụta ya : monomer, Aha onye ahịa : monomer.
Ihe omuma a di nma bu ihe nmeri nke onyunyo olaedo n’egwurugwu ndi mmadu n’egwuregwu mmeri.	Ga-ahụrịrị ihu ọma ihe nrịba ama ndị na-enye ihe n ’akwụkwọ ọla edo iji nweta ọtụtụ ihe ọhụụ, ihe ọhụụ, nke mbụ na ngwa ahịa ọkụ na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ ọkụ.
Ajụjụ ọnụ nke ụbọchị
Ajụjụ ọnụ nke ndị mmebe ama ama ama n’ụwa.
Tọọzdee 6 Jenụwarị 2022
Gụrụ ajụjụ ọnụ na mkparịta ụka kachasị ọhụrụ na imewe, okike na ihe ọhụrụ n’etiti akwụkwọ akụkọ ihe okike na ndị okike ama ama n’ụwa, ndị na-ese ihe na ndị na-ese ihe. Hụ oru mmezi ohuru na ihe nmeri inweta nke ndi okacha amara, ndi na-ese ihe, ndi na-ese ihe na ndi ohuru. Choputa nghọta ohuru banyere ihe okike, ihe okike, nka, imewe na ije. Mụọ maka usoro nhazi nke nnukwu ndị na-ese ihe.
Ihe ịchọ mma, akwa anya na imewe elekere
Illusion Weebụsaịtị Wenezdee 26 Jenụwarị
Smartstreets-Smartbin™ Sịga / Chịngọm Okpu Tiuzdee 25 Jenụwarị
Shayton Equilibrium Hypercar Mọnde 24 Jenụwarị
Jenụwarị 2022 (93)
Disemba 2021 (93)
Ọktoba 2021 (93)
Ajụjụ ọnụ nke ụbọchị Wenezdee 26 Jenụwarị
Chepụta akụkọ mgbe ochie Tiuzdee 25 Jenụwarị
Nhazi nke ubochi Mọnde 24 Jenụwarị
Onye rụrụ ụbọchị Mbọsị Ụka 23 Jenụwarị
Otu mmebe nke ụbọchị Satọdee 22 Jenụwarị
Ọla monomer odyssey